सन्दीपको किफायती बलिङसँगै स्टार्सको सहज जीत - Pokhara News
सन्दीपको किफायती बलिङसँगै स्टार्सको सहज जीत
२०७६ माघ १, १८:४९ मा प्रकाशित
पोखरा न्यूज -०१, माघ। अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिगमा सन्दीप लामिछानेसहित बलरहरुले शानदार प्रदर्शन गरेसँगै लिग लिडर मेलबर्न स्टार्सले पर्थ स्कर्चर्स माथि ८ विकेटको सहज जीत हात पारेको छ ।
खेलमा टस जितेर पर्थले पहिले ब्याटिङको निर्णय गर्यो । खराब ब्याटिङ गरेको पर्थ १३.५ ओभर मात्र खेल्दै सबै विकेट गुमाएर ८६ रनमै सीमित हुन पुग्यो । उसका लागि जोनी इङ्लिसले ३७ रन बनाउनु बाहेक अन्य कसैले उल्लेख्य योगदान दिन सकेनन् ।
पर्थको इनिङमा इङ्लिस बाहेक क्यामरुन ब्र्याङ्कफ्टको १० रन नै सर्वाधिक रह्यो । बलिङ तर्फ स्टार्सका ज्याक्सन कोलम्यानले ३ ओभरमा १६ रन खर्चंदै ३ विकेट लिँदा नेपालका लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेले ३ ओभरमा ७ रन मात्र खर्चेर २ विकेट लिए ।
प्रतिउत्तरमा ८७ रनको झिनो लक्ष्य मेलबर्न स्टार्सले कुनै कठिनाई विना १२ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । स्टार्सका लागि ओपनर मार्कुस स्टोइनसले रन ३९(३१) बनाउँदा अर्का ओपनर हिल्टन कार्टराइटले १९(२५) रनको योगदान दिए ।
मेलबर्नको जीतसँगै १० खेलबाट १८ अङ्क भएको छ र अङ्कतालिकाको शीर्षस्थानमा कायम छ । हारेको पर्थ स्कर्चर्स १० खेलबाट १० अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा कायम छ ।
सिनियर क्रिकेटरको गुनासो : गण्डकी प्रदेशको क्रिकेट खस्कियो !
तनहुँमा १ करोड लगानीमा फुटसल सञ्चालन
मुख्यमन्त्री कपका विजेता र उपविजेताले पाएनन् नगद पुरस्कार !
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि पोखरामा खेल मैदानको खोजी
पोखरामा मोटरसाइकल र बस ठोक्किदा २ को मृत्यु
२०७४ माघ ८, ०७:५६ मा प्रकाशित
जन्ती बोकेको बस नदीमा खस्दा २४ को मृत्यु
पोखरामा १६ करोड लागतमा सैनिक अस्पताल
पोखरामा डुंगा पल्टिँदा बेपत्ता भएका लुइँटेल मृत फेला
पोखराको सहिद पार्कमा रविन्द्र अधिकारीको शालिक अनावरण
अली मियाँ लोकवाङमय पुरस्कारबाट अम्बिका भण्डारी पुरस्कृत
कोरोनाका कारण जापानका सबै विद्यालय बन्द गरिने
नेपाल टेलिकमको टावर ढल्दा ३ घाइते
इनार छेउमा फालिएका नवजात शिशुको उपचार पश्चात बालग्रामलाई जिम्मा
पोखरामा कार दुर्घटना, एकको मृत्यु, ४ घाइते (नामावली सहित )
पोखरामा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
पोखरा कार दुर्घटना : गम्भीर घाइते भएकी छोरीको पनि मृत्यु
सन्तान प्राप्ति हुने आशाले लमजुङको इशानेश्वरमा भक्तजनको भीड
पोखरामा रबिन्द्र अधिकारीको शालिक अनावरण हुँदै
साइकललाई जोगाउन खोज्दा बस पल्टियो
सम्पादक : गणेश बराल(ढाका मोहन) सह-सम्पादक : दीननाथ बराल हाम्रो टिम